प्रहरीले धन्यवाद त दिनुभयो तर मेरो घाटाको जिम्मा कसले लिन्छ?
फाल्गुन ९ सोमवार, २०७८, २१:१२ बजे
काठमाडौं । सवारी साधनहरू मज्जाले गुडिरहेका छन्। हिँडडुल गर्ने मानिसको घुइँचो उत्तिकै छ। यो नयाँबानेश्वरको सोमबारको दृश्य हो। आइतबार भने यहाँको दृश्य फरक थियो।
अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता ‘एमसिसी’ लाई लिएर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको भिडन्तले नयाँबानेश्वर चोक रणभूमिमा परिणत भएको थियो। सडकमा ढुंगाहरू यत्रतत्र छरिएका थिए। कहीँकतै टायर र डिभाइडर नै बालिएका थिए। सोमबार ती सबै सफा भइसकेका छन्। तर बुद्धनगरकी जानकी श्रेष्ठको पसलमा आइतबारको अवशेष बाँकी छ।
जानकीले आफ्नो कपडा पसल सफा गरिसकेकी छैनन्। अघिल्लो दिन प्रदर्शनकारीहरूले हानेका ढुंगा र त्यही ढुंगा लागेर फुटेका सिसाका टुक्रा अझै त्यहीँ छन्। नयाँ बेच्न राखिएका कपडा र डमीहरू भुइँमै छताछुल्ल छन्।
सडकमा जुधिरहेका प्रदर्शनकारी र प्रहरी आफ्नो पसलभित्र पस्छन् भन्ने जानकीले सोेचेकै थिइनन्।
बानेश्वरमा एमसिसीविरूद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ भन्ने थाहा थियो। तर बुद्धनगरका पसल सबै खुल्लै थिए,’ उनले भनिन्, ‘प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरू बुद्धनगर पनि आउलान् भन्ने त चिताएकै थिएनौं।’
प्रदर्शनकारीहरू जसै बुद्धनगरतिर आउन थाले, सबै व्यापारीले धमाधम पसल बन्द गरे। जानकी पनि हतारहतार सटर लगाउँदै थिइन्।
त्यही बेला पाँच जना प्रहरी केही प्रदर्शनकारीलाई लखेट्दै आए। तर एक्कासि चारैतिरबाट ओइरिएका प्रदर्शनकारीले ती प्रहरीलाई घेरा हाले र ढुंगा हान्न थाले।
जानकीको पसल आधा खुल्लै थियो। प्रदर्शनकारीबाट घेरिएका प्रहरी आफ्नो ज्यान जोगाउन जानकीकै पसलमा छिरे।
यताबाट पनि उताबाट पनि प्रदर्शनकारीले घेरा हालेपछि पाँच जना प्रहरीले जाने ठाउँ कतै देखेनन्,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो।’
प्रहरीहरू एकाएक आफ्नो पसलमा छिरेपछि जानकीले उनीहरूलाई नआऊ भन्न सकिनन्।
‘भित्र आएको मान्छेलाई बाहिर जाऊ भन्न मैले उचित ठानिनँ,’ उनले भनिन्, ‘पुलिस आए पनि, जनता आए पनि त्यसरी ज्यान जोगाउन भित्र आएको मानिसलाई मानवताको नाताले पनि बाहिर पठाउन मिल्दैन।’
त्यति बेला उनले प्रहरीहरू आश्रय लिन आएपछि पसलमा क्षति पुग्न सक्छ भनेर सोचेकी थिइनन्। प्रदर्शनकारीहरूले उग्र रूपमा पसलमाथि नै ढुंगामुढा गरे। उनीहरूले बन्द सटरधरि खोलेर प्रहरीमाथि ढुंगा बर्साउन थाले। प्रहरीलाई ताकेर हानेका ढुंगाले उनको पसलमा क्षति पुग्यो।
प्रदर्शनकारीहरू आफैंले सटर तानेर ढुंगा हिर्काउन थाले। सबै सिसा फुटे,’ उनले भनिन्, ‘म एकदमै नर्भस थिएँ। प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीलाई मात्र होइन, मलाई पनि भित्र राखेर ढुंगा हान्दै थिए। म जसोतसो बाहिर निस्केँ र प्रहरीलाई भित्रै राखेर सटर बन्द गरिदिएँ।’
झन्डै आधा घन्टापछि थप प्रहरी आएर उनीहरूको उद्धार गरेको जानकीले बताइन्।
आफ्नो पसल छिरेका ती प्रहरी को थिए र कहाँका थिए भन्ने जानकीलाई थाहा छैन। प्रहरी र प्रदर्शनकारीको झडपमा आफ्नो पसलमा क्षति भएको उनी गुनासो गर्छिन्। आफूले प्रहरीको ज्यान जोगाए पनि पसल जोगाउन नसकेकोमा उनी दु:खी छिन्।
जानकीले पसलको बिमा नगरेकीले उनलाई थप मर्का परेको छ।
मलाई परेको घाटाको जिम्मा कसले लिन्छ? राज्यले लिन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सुख पाउने ठूल्ठूला नेताहरूले मात्रै हो, दु:ख पाउने त हामी जनताले हो।’
सिसा लागेर जानकीलाई सामान्य चोट पनि लागेको छ। घटनापछि उनी बानेश्वरस्थित प्रहरी वृत्तमा पुगेकी थिइन्। ज्यान बचाइदिएको भन्दै प्रहरीले धन्यवाद दिएको उनले बताइन्।
‘प्रहरीले धन्यवाद त दिनुभयो तर उहाँहरूले मेरो क्षतिपूर्ति दिने होइन होला,’ उनले भनिन्, ‘मैले मेरो पसलमा के कति क्षति भएको छ हेरिसकेको छैन। कम्तीमा पाँच-छ लाखको क्षति भयो होला। सबै सामान नोक्सान भएका छन्।’